Manana sofina misokatra eo amin'ny fiarahamonina Afrikana Atsinanana izao ny Birao Fizahan-tany Afrikanina "One Africa"
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Manana ny sofina misokatra eo amin'ny fiarahamonina Afrikana Atsinanana ny Birao Fizahan-tany Afrikana "Africa One" ankehitriny
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • WTN
Manana ny sofina misokatra eo amin'ny fiarahamonina Afrikana Atsinanana ny Birao Fizahan-tany Afrikana "Africa One" ankehitriny
Ny birao fizahantany afrikanina dia mahomby amin'ny iraka ampanaovany ny toerana hiarahan'ny fizahantany afrikanina sy hampiroborobo ny kaontinanta na faritra ao amin'ny kaontinanta ho iray fizahan-tany.
Ireo firenena mpikambana ao amin'ny Afrikana Atsinanana dia miara-miasa amin'ny famarotana ny fizahan-tany ho toy ny bloc amin'ny alalàn'ny fampirantiana fizahan-tany isam-paritra isan-taona, mikendry ny hampiakatra ny isan'ny mpizahatany mitsidika io faritra io taorian'ny fahasimban'ny valanaretina COVID-19.
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana fizahan-tany voalohany ho an'ny firenena mpikambana ao Afrika Atsinanana.
Ny talen'ny ATB Andriamatoa Cuthbert Ncube dia nanome ny fampirantiana ny fizahantany any Atsinanana Atsinanana (EARTE) voalohany izay nifarana tamin'ny herinandro lasa teo taorian'ny asa nataony nandritra ny telo andro.
Cuthbert Ncube, ny filohan'ny ATB dia nanambara nandritra ny fampirantiana fa ny E.fanjakana mpikambana ast African Community (EAC) dia nandray ny dingana marina mankany amin'ny tanjon'ny fandaharam-potoana afrikanina mba hahitana ny EAC ho toy ny bloc mifampikasoka amin'ny fomba fampiraisana sy voarindra tsara hampandroso ny fizahantany afrikanina.
Ny Vondrona Afrikanina Atsinanana (EAC) dia fikambanana isam-paritra itsinjaram-pahefana misy firenena 6 mpiara-miasa: ny Repoblika Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan atsimo, ny Repoblika iraisan'i Tanzania, ary ny Repoblikan'i Oganda, miaraka amin'ny foibeny ao Arusha, Tanzania.
Nilaza izy fa hiara-hiasa akaiky amin'ireo mpikambana EAC ny ATB hanatsara ny fampandrosoana haingana ny fizahan-tany isam-paritra ao amin'ny bloc.
Ny filoham-pirenena Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi dia nanambara areti-mandringana hanombohana ny fampirantiana ny fizahantany any Afrika Atsinanana (EARTE) fanao isan-taona ho an'ny mpikambana ao amin'ny blokc EAC.
Nilaza i Dr. Mwinyi fa ny fanjakana mpiara-miasa amin'ny EAC dia mila manitsy sy mamerina mijery ireo politika izay mampihena ny fivoaran'ny fizahan-tany any amin'ny faritra ho an'ny vokatra sy serivisy mpizahatany mitovy amin'izany.
Ny fandefasana ny EARTE fanao isan-taona dia hanokatra làlana vaovao ho an'ny faritra EAC ary hizaha lalana sy paikady vaovao izay hamidy ny faritra ho tokan-tena tokana, hoy i Mwinyi.
Ny fiainana dia, ny natiora voajanahary ao anatin'izany ny tendrombohitra, ny ranomasina ary ny morontsiraka, ny natiora ary ny toerana manan-tantara no manintona ny mpizahatany vahiny sy isam-paritra mankany amin'ny faritra EAC.
Ny fameperana ny famoahana ny fizahan-tany sy ny visa, ny tsy fisian'ny fandrindrana eo amin'ny faritra EAC dia nanemotra ny fampandrosoana ny fizahan-tany isam-paritra.
Ireo fanjakana mpiara-miombon'antoka EAC dia tsy maintsy miverina amin'ny tabila fanaovana sary hamonjy ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fanarahana haingana ny famaranana ny Protokol EAC momba ny fitantanana fizahan-tany sy ny fiainana dia, ary manamafy ny fanasokajiana ny toeram-ponenana fizahan-tany, mpikambana ao amin'ny Antenimiera mpanao lalàna atsinanana atsinanana ( EALA) dia nanolotra soso-kevitra tamin'ny governemanta EAC.
Ny tsy fahampian'ny rafitra fifanakalozam-baovao voarindra sy voadinika tsara ho fampandrosoana ny visa mpizahatany dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany isam-paritra, indrindra tamin'ny vanim-potoanan'ny pandemia COVID-19.
Ny sekretera jeneralin'ny EAC, Dr. Peter Mathuki, dia nilaza fa ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena ao amin'ny faritra EAC dia tsy nitsaha-nitombo ary nitombo ny tahan'ny isan'ny firenena mpiara-miasa. Nahatratra 6.98 tapitrisa izany tamin'ny taona 2019 talohan'ny valanaretina COVID-19.
Ny isan'ireo mpizahatany tonga tany amin'ny faritra EAC dia nidina 67.7 isan-jato tamin'ny taon-dasa (2020) ho an'ny mpizahatany iraisam-pirenena eo amin'ny 2.25 tapitrisa, ary very 4.8 miliara dolara amerikana tamin'ny vola azon'ny mpizahatany.
Ny faritra EAC dia efa naminavina ny hisarika mpizahatany 14 tapitrisa tamin'ny 2025 talohan'ny valanaretina COVID-19.
Ny fampiroboroboana ny fonosana fizahan-tany marobe ary ny fampiasam-bola ho an'ny fizahan-tany ary ny fandrisihana, ny ady amin'ny fanjonoana olona ary ny varotra bibidia tsy ara-dalàna no paikady ilaina amin'ny fampandrosoana ny fizahantany isam-paritra, hoy i Dr. Mathuki.
Ny fipoahan'ny COVID-19 dia nisy fiatraikany ratsy tamin'ny tombotsoan'ny fizahan-tany amin'ny asa be sy fidiram-bola, ary nanimba ny ezaka fiarovana ny bibidia koa noho ny fihenan'ny sarany nangonin'ny mpitsidika ny valan-javaboary sy ny vakoka.
Ny fameperana ny fizahan-tany ataon'ireo mpizahatany miampita ny sisin-tany EAC dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fizahan-tany niampitana ny sisintany, avy eo nanakana ny fivezivezena ireo mpizahatany iraisam-pirenena sy isam-paritra tsy hiditra amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy, ny ankamaroan'ny Kenya sy Tanzania izay mitovy fijery manintona ihany.
Ho setrin'ny valanaretina pesta, ny Sekretera EAC dia namolavola drafitra fanarenana fizahan-tany izay hitarika ny faritra amin'ny famerenana ny fizahan-tany hiverina amin'ny ambaratongam-pirazanana.
Ireo firenena mpikambana ao Afrika Atsinanana dia mizara fizahan-tany sy fiainana dia toy ny loharanom-pahalalana mahazatra amin'ny alàlan'ny fivezivezena ny fiainana dia, mpizahatany, mpandraharaha fizahan-tany, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ary tompona hotely.
Mount Kilimanjaro, ecosystem Serengeti, Mkomazi, ary Tsavo National Parks, ny morontsiraky ny Ranomasimbe Indianina, zaridaina chimpanzee ary gorila any Tanzania Andrefana, Rwanda, ary Uganda no loharano sy loharanom-pahalalana fizahan-tany isam-paritra ifampizarana eo amin'ireo fanjakana mpikambana EAC.
Ny filankevitry ny fizahantany sy ny bibidia EAC dia nanohana ny 15 Jolayth amin'ity taona ity, EAC Regional Tour Expo (EARTE) horaisin'ny fanjakana mpiara-miombon'antoka mifandimby.